My freedom: "ဥ"လင်္ကာ
ဟာာာလို... ("Hello" ဟု ဘာသာပြန်ပါ)
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဘာရေးလို့ ရေးရမှန်းမသိဘူး။ တပတ်တခါပိုစ့်တင်ချင်တဲ့ ရောဂါကလည်းရှိတော့ အချိန်တန်ရင် ဒီအပေါ်သူ့အလိုလိုရောက်လာတယ် (သည်းခံပါ)။ ဒီနေ့ကြက်ဥနှစ်လုံး အလုပ်ကလက်ဆောင်ရလာတယ်။ ဘော့စ် ကလေးမွေးလို့ပေးတာ။ သူများတွေပြောတာတော့ ကလေးမွေးရင် ကလေးကျန်းမာအောင် ကြက်ဥပေးရတယ်တဲ့။ တရုတ်အယူထင်တယ်... ကန်ဒီတော့ ခုမှကြားဖူးတာ။
"ကြက်ဥလေးကအနီလေးတော့... ချစ်စရာလေး... စားတောင်မစားရက်ဘူး"ဆိုပြီး နောက်ဆုံးကျတော့ ညစာဘာစားရမလဲ စဉ်းစားမရတာနဲ့... သူတို့ခမျာ ကြက်ဥသုပ်ဘ၀ရောက်သွားရှာတယ် ဟဟဟ... I'm so evil xD
ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊ ကြက်သွန်နီအစိမ်း၊ နံနံပင်၊ သံပရာသီး၊ ဆားနဲ့ ကြက်ဥကိုရောလိုက်တဲ့အခါ ကြက်ဥသုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ ငရုတ်သီးအစိမ်းတောင့်ထည့်ဖို့ မရှိလို့ မထည့်လိုက်ရဘူး။ ကန်ဒီ့နံနံပင်ကို ကြည့်ပြီး လန့်သွားလား?? ကန်ဒီက နံနံပင်အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကန်ဒီ့ညီမက လတစ်ချောင်းငင် သေးသေးတင် ၀တ်စနှစ်လုံးပေါက် "လုံး"၊ ၀လုံးရေ"၀"၊ "လုံးဝ" မကြိုက်ဘူး။ သူမစားဘူးဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သုပ်တယ်။ ကန်စွန်းရွက်နဲ့မှို ကြော်တယ်။
ဒီတစ်ပတ် Audit ရှိတော့ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က နေ့တ၀က်မပြန်ရဘူး။ လိုအပ်တာတွေ လိုက်ကူပေးနေတာ တနေကုန်သွားတယ်။ ညမှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ ကန်ဒီ့သူငယ်ချင်း ဖိလစ်ပင်းမလေးနဲ့ ရိုက်ထားတာ။ အလုပ်ချိန်မဟုတ်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်။ "The Maze Runner" ကြည့်ချင်လို့ အလုပ်ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နောက်အပတ်သွားကြည့်မယ် ပြောထားတယ်။ "The fault in our stars" လိုမျိုး ၀မ်းနည်းရမယ့်ဇာတ်လမ်းတွေဆို မကြည့်ချင်ဘူး။ အသည်းငယ်တယ်။ သူများတွေ iPhone6ကို အရူးအမူးဖြစ်နေကြချိန်မှာ ကိုယ်ကအေးဆေးပဲ။ ကန်ဒီက အဲ့လို Technology ပိုင်းတွေ စိတ်ကိုမ၀င်စားတာ။ ကိုယ့်ဖုန်းတောင် Facebook သုံးရုံ၊ Message ပို့ရုံလောက် သုံးတာ။ ဘာမှလည်း သိပ်မသိဘူး။ ဟိုတလောက ဖုန်းလဲလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်း ဖုန်းအဟောင်းကို မမြင်ချင်လို့ -.-
အခုလောလောဆယ် လိုချင်နေတာက ကန်ဒီ့ပန်းချီပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့ စင်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ သေတ္တာလေးဖြစ်ဖြစ်။ အခုက ဆေးတွေရော၊ စုတ်တံတွေရော၊ စာအုပ်တွေရော ဖြစ်သလို ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ။ IKEA ကို တစ်ရက်လောက် သွားချင်တယ်။ ကန်ဒီ့အိမ်နဲ့နီးနီးလေးရယ်... အဲ့ဒါကို ခုထိမရောက်ဖြစ်သေးဘူး။ ကန်ဒီ့ညီမကို အရင်စည်းရုံးရမယ်။ တဖက်ကကြည့်ရင်လည်း မရောက်ဖြစ်တာကောင်းပါတယ်။ ကန်ဒီ့ပုံစံနဲ့ဆို အဲ့ရောက်တာနဲ့ ကုန်မှာပဲ(ပိုက်ဆံ)။
ဟိုတလောက Passport သက်တမ်းသွားတိုးတုန်းကအကြောင်း ပြောပြဦးမယ်။ သူတို့ Website မှာပဲ Queue နံပါတ်ယူပြီး သွားလိုက်တယ်။ Websites မှာ ယူလာရမယ်လို့ ရေးထားတာတွေ အကုန်ယူသွားတာပေါ့။ ဟိုရောက်တော့ ကန်ဒီက အရင်က ဒီမှာကျောင်းတက်ခဲ့တော့ Certificate တွေ၊ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ Original ရော၊ Copy ပါ ပြရမယ်ဆိုတာနဲ့ အိမ်တစ်ခေါက်ပြန်ယူလိုက်ရတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ အိမ်ကနီးလို့... Websites မှာ အဲ့ဒါတွေလည်း မရေးထားဘူး။ အဲ့တုန်းက နှစ်ခါမောတယ်။ ကန်ဒီ့လိုနှစ်ခါမမောရအောင် သက်တမ်းသွားတိုးမယ့်လူတွေအတွက် ပြောပြတာ။ အဲ့တုန်းကတည်းက ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့ ခုမှရေးဖြစ်တယ်။ အဲ့လို အားကိုးရတာ ဟဟ :D
တစ်ပတ်တစ်ခါ ပို့စ်မှန်မှန်ရေးတင်နိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ် သကြားလုံးလေးရယ် ပုံမှန်လေးဖတ်ရတာမို့ ကျေးဇူးလဲတင်ပါရဲ့။ ကြက်ဥသုပ် မဆိုးဘူး ဒါလဲဟင်းတစ်မယ်မို့ မှတ်ထားလိုက်ပြီ။ အမြဲ လန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့ သကြားလုံးလေး အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ...
မယ်ကန်ဒီရေ ငါ့ကိုဖုန်းလေးခေါ်ပါလားကွယ် နာဖုန်းပျောက်သွားလို့အေ
After getting my new phone, I also lost some contact numbers including yours sis. byalll... I tried to message you on facebook but cannot. Did you change setting for messaging?? Don't know how to contact >.<
နံနံပင် ကြည့်ပြီး မလန့်ပါဘူး။ ဒီကလည်း နံနံပင်ကြိုက်တယ်။ :)